Tọọ isiokwu cursor na Xfce | Site na Linux
Ndị nke anyị bụ ndị eji ọrụ Xfce anyị maara na ịgbanwe cursor isiokwu, anyị dị nnọọ ga-aga NchNhr »Ntọala» useké »Okwu.
Mana ma ọ dịkarịa ala na nke m nke a anaghị arụ ọrụ kpamkpam, n'ihi na ụfọdụ na ụfọdụ ngwa, ọ naghị egosi isiokwu ahọpụtara n'ụzọ ziri ezi. Kedụ ka anyị ga - esi mee isiokwu cursor otu maka sistemu niile?
Dị mfe, ihe anyị na-eme bụ nke anyị / n'ụlọ faịlụ ahụ .Nke Mmekọ ma anyị tinye usoro ndị a na ya:
Ebee Bluecurve-ntụgharị-FC4 bụ aha folda ebe isiokwu cursor dị.
Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị were anyị nwere isiokwu cursor akpọ Adwaita, nke dị n'ime ~ / .icons / Adwaita o / usr / share / icons / Adwaita, mgbe ahụ ahịrị ga-adị ka nke a:
Anyị na-amaliteghachi nnọkọ na voila!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Debe isiokwu cursor na Xfce
Ezi ndụmọdụ, otu ihe ahụ mere m mgbe m ahaziri Xfce: D. Apụghị m ịhụ udi nke ga-abụ otu cursor maka dum usoro. Echere m na ọ baara m uru. Cheers!
Daalụ maka ndụmọdụ…
Emeela m nke a ọtụtụ oge ma ọ naghị arụ ọrụ. Ọ na-aga site na Ndabara isiokwu ka Okwu ahụ m gbanwere.
Emere m ya na Xubuntu ma ọ rụọ ọrụ mana na Debian na m bụ ugbu a ọ chọghị ịrụ ọrụ. Na-eburu n'uche na ọ bụ otu ụdị nke XFCE. (4.8) Ọ dị ịtụnanya 🙁
Ọ bụla data maka nke a?
Ndewo. Emeela m ihe ị na-ekwu ugbu a enweghị nsogbu ọ bụla. Daalụ. Mana enwere m ajụjụ m ga - achọ ka ị mata otu ị ga - esi edozi, ebe m chere na ọ ga - eme ka ị nweta ozi bara uru ị nyere anyị. Enwere ụzọ iji belata cursor? Enwere m nke masịrị m n'ezie mana enweghị m ike ime ya pere mpe. Na windo ebe a na-achịkwa ya, ọ naghị erughị 16 (pikselụ, m chere) na maka m ọ dị ukwuu. Ekwesịrị m ịsị na nkwụsị XFCE na m na-eji netbook. Ikekwe ọ bụ ya mere o ji dị m ezigbo mma! Ana m echere azịza gị. Daalụ!
Ọ bụ ezie na ọ dị ka agbahapụla edemede a, m ga-arịọ maka enyemaka ọzọ, ọ bụrụ na ụfọdụ mkpụrụ obi ebere na-emere ndị anyị ebere na-anọgide na-ata ahụhụ site na omume a. Aghụghọ a anaghị arụ ọrụ, etinyego m ọtụtụ Xfce kemgbe ahụ ma nsogbu ahụ na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ejirila mee ka cursor kwụsie ike na ngwa niile, biko gwa ha otu.
Ezi, m mere ihe i kwuru ma ọ dịghị ihe, cursor na nkịtị ala bụ ndabara, ọ na-agbanwe naanị cursor ọzọ na ndị ọzọ na-ekwu ,. Gịnị ka a pụrụ ime? Enwere m ule debian.
Wayszọ 2 iji mara UUID nke HDD gị